Manomeza voninahitra an'Andriamanitra isan'andro - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Hajao isan'andro isan'andro
Rehefa mandeha any amin'ny birao aho na mihaona amin'ny olona mpandraharaha dia manao zavatra manokana aho. Amin'ny andro ijanonako ao an-trano, dia miakanjo akanjo isan'andro aho. Azoko antoka fa manana azy ireo koa ianao - pataloha jeans sy pataloha misy zorony.
Rehefa mieritreritra ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao, mieritreritra akanjo manokana ve ianao sa mihoatra ny akanjo isan'andro? Raha manaja azy ny zavatra ataontsika mandritra ny fotoana rehetra dia mila mieritreritra zavatra andavanandro isika.
Eritrereto ireo asa izay mikasa andro mahazatra: mitondra fiara, mandeha any an-tsekoly na mankany amin'ny fivarotana fivarotana, fanadiovana trano, fandotoana ny bozaka, fanesorana fako, fandinihana ny mailaka. Tsy misy amin'ireto zavatra iray ireto fa miavaka ary ny ankamaroany dia tsy mitaky akanjo kanto. Rehefa momba ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia tsy misy endriny sahala amin'ny hoe "tsy misy lobaka, tsy misy kiraro, tsy misy serivisy." Manaja ny fivavahantsika izy amin'ny "ho tonga toa anao".
Afaka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fomba vitsivitsy aho, ary hitako koa fa rehefa manandrana manome voninahitra azy aho, dia mahazo fahafaham-po aho. Ity misy ohatra avy amin'ny fiainako: makà fotoana hanamafisana ny fiandriananao ahy ary hivavaka ho an'ny hafa. Mba hahitana olona hafa avy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra sy hitondrana azy ireo mifanaraka amin'izany.
Manatanteraka ny andraikitro ao amin'ny fianakaviako sy ny tranoko. Mihinana tsara, manao fanatanjahan-tena, ary matory ampy (ny vatako dia tempolin'ny Fanahy Masina). Hanolotra ny olako sy ny fiovako amin'Andriamanitra ary hiandry ny valiny avy aminy. Hampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomeny ho amin’ny tanjoko.
Manaja an'Andriamanitra isan'andro ve ianao? Sa misy zavatra itehiranao ho an'ny fotoana izay ahafahanao mitafy "? Mitranga ve izany rehefa mandeha miangona ianao?
Raha mbola tsy naheno na namaky momba ny fampiharana ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia tena amporisihiko aminao izany. Rahalahy Lawrence dia moanina tamin'ny taonjato faha-17 izay nianatra ny dikan'ny hoe manome voninahitra an 'Andriamanitra amin'ny zavatra mahazatra amin'ny fiainana andavanandro. Nandany fotoana betsaka niasa tao amin'ny lakozia monasitera izy. Nahita fifaliana sy fahafaham-po be tao izy, ohatra tsara ho ahy rehefa mimenomenona momba ny mahandro na manadio lovia aho!
Tiako ny vavaka nolazainy alohan'ny hanombohany ny asany: "Ry Andriamanitra ô, satria miaraka amiko ianao ary ankehitriny, dia tokony hankatò ny zavatra nandidianao aho - tariho ny sainao amin'ity asa ivelany ity. hanome ahy ny fahasoavana hanohizako izany eo imasonao. Amin'ity tanjona ity, enga anie ny asako hampandroso ny asanao. Apetrako ao aminao daholo ny zava-drehetra sy ny fitiavako rehetra. "
Hoy izy momba ny asany any an-dakozia: "Ho ahy dia tsy mitovy amin'ny fotoam-bavaka ny ora fiasana izao. Amin'ny tabataba sy fikorotanana ny lakoziko, raha toa ka misy olona manana faniriana samihafa, ankafiziko Andriamanitra toy ny milamina toy ny rehefa nandohalika teo amin'ny alitara aho, vonona ny sakramenta maka. "
Aoka isika hampihatra ny fanatrehan'Andriamanitra na manao ahoana na manao ahoana, ary hanome voninahitra azy amin'ny zavatra andavanandro. Na dia diovina sy manadio ny lovia aza izahay.